Hanks Reeling စက်ရန်အမြင့် Stretch ပိုး Cone - တရုတ်အမြင့် Stretch ပိုး Cone Hanks Reeling စက်ပေးသွင်းရန်,စက်ရုံ -FEIHU
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြား machine
Hanks Reeling စက်ရန်အမြင့် Stretch ပိုး Cone
ဒဏ်ငွေသိုးမွှေးသို့မဟုတ်ကြမ်းသိုးမွှေးသို့မဟုတ် midfibre ထည်ပြီးသက်ဆိုင်, တည်ငြိမ်သောအရွယ်အစားနှင့်အတူထည်ပြီးစေခြင်းနှင့်ချောမွေ့နှင့်ပျော့ပျောင်းခံစားရ, နူးညံ့သိမ်မွေ့တောက်ပြောင်ဝိသေသလက္ခဏာများ. စက်ကြီးမားစွမ်းရည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လျှပ်စစ်မီးချွေတာရေး, ရေနွေးငွေ့နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေးချွေတာ. ကွန်ပျူတာအားဖြင့်တင်းမာမှုနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစီးဆင်းမှု၏အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု.
ချည်ခင် Hanks တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားစက်
စက်တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြား Hanks FH24K, ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူရှိ, သငျသညျလုပ်ကိုင်ရန်မလွယ်ကူ, သင်အလွယ်တကူစွန်းပြီးနောက်ကြိုးချွတ်စေနိုင်သည်. ဒီအစက်လွယ်ကူသောနိုင်လွန် Hanks တည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားနိုင်ပါတယ်.
သိုးမွှေးချည်ငင်, ဇာထိုး, ပိုး, နိုင်လွန်ကြိုး, မြင့်သော
လမ်းပိုင်းပိုးစက်မှုလုပ်ငန်း, တစ်လိမ် processinto သို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလှိမ့်ခြင်းဖြင့်, လာမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်ဆေးဆိုးဖို့ကြိုး၏ပုံသေအရှည်, အခွအေနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ZeLun တစ်ဦး Pre-ဆေးလိပ်သောက် High-elastic ကြိုး shrinkagerole play.
Hanks 24 20
ရှုးအကွာအဝေး 100-140မီလီမီတာ 100-140မီလီမီတာ
အဘယ်အရာကိုများအတွက်အဓိက ကွမ်းသီး / ချည် ကွမ်းသီး / ချည်
Transformer တန်ပြန် ပြောင်းလဲမှုကိုဂီယာအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုကိုဂီယာအားဖြင့်
ချည်ခင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတန်ပြန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုတင်တန်ပြန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုတင်တန်ပြန်
မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ် 300-350အင်ဗာတာအားဖြင့် rpm ပါ 300-350အင်ဗာတာအားဖြင့် rpm ပါ
ပုံဖော် Hanks : D အမျိုးအစားစည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု shaping : D အမျိုးအစားစည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု shaping
ဘရိတ်စနစ်က magetic ဘရိတ်အားဖြင့် magetic ဘရိတ်အားဖြင့်
ရှုထောင့် L3750 * W680 * H1060 L3750 * W680 * H1060
လွန်ခဲ့သော : Hanks Reeling စက်စေရန်ပိုးနိုင်လွန် Cone Spinning Polester သိုးမွှေး
နောက်တစ်ခု : Hanks Reeling စက်စေရန်ပိုးနိုင်လွန် Cone Spinning Polester သိုးမွှေး